ကြက်သား ကြာဇံကြော်/Fried Chicken Rice Noodles | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ဘိတ်ချဉ်လေး နဲ့ ဝက်သားလုံးကြော်
ကွမ်းရွက်နဲ့ချက်တဲ့ ဂဏန်းအစပ်/Spicy crab cooked with betel leave(piper betle) →
ကြက်သား ကြာဇံကြော်/Fried Chicken Rice Noodles
ဒီနေ့ ကြာဇံကြော် ကြော်ဖြစ်တယ် အလုပ်ထဲကိုယူသွားဖို့ပါ၊ လူအယောက် ၂၀ စာကြော်ရတယ်၊ ၂ဗန်းစာပေါ့။ အမျိုးသားကို ကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ ခိုင်းရတယ်၊မသယ်နိုင်လို့လေ၊ မနက် ၆နာရီခွဲ ကားရှင်းနေတော့ အလုပ်ကို ၁နာရီစော ရောက်သွားတယ် ၊ကျွေးချင်ဦးဟဲ့ ။
ဒါကကြော်ဖြစ်ပုံဇာတ်လမ်းပါ။ ကြက်ဥကြော်မစားတဲ့သူတွေပါလို့ကြက်ဥကြော် မထဲ့ဘူးနော်။ ကြော်နည်းရေးတော့မယ်နော် . ရေးပေးထားတဲ့အချိုးက၅ယောက်စာပဲနော်
I have fried rice noodles today to take it to work. I did that for 20 people, about2large trays. As I couldn’t carry it myself, I made my husband drive early in the morning around 6.30 am when there was less traffic, I got to work 1 hour prior to my starting time, damn generosity 🙂 That wasabrief story behind for this fried rice noodle. There were some people who didn’t eat eggs so no eggs in my fried noodle. Now, I am going to write the recipe for5servings.
-ကြက်သား mince ၅၀၀ ဂရမ်
– မုန်လာဥနီနှစ်လုံး ( အမျှင်ခြစ်ထားပြီး)
-ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလှီးထား ( စွတ်ပြုတ်ပန်ကန်လုံးတလုံးစာ)
– ပဲပင်ပေါက် ( စွတ်ပြုတ်ပန်ကန်လုံးတလုံးစာ)
-ပဲငံပြာရည်အကြည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
-ပဲငံပြာရည်အနောက် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းခွဲ
-သကြား စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
-ဆား၊ ကြက်သားမှုန့် အနဲငယ်
-mince chicken 500g
-slice one onion
-chopafew spring onion
-two carrots peeled
-sliceasoup bowl of cabbage
-sprouts requiredasoup bowl size
-3 table spoons of soy sauce (clear)
-2 and half table spoons of thick soy sauce
-1 table spoon of sugar
-salt and chicken powder as required
ပထမဆုံး ပဲငံပြာရည်အနောက် နဲနဲရယ်၊ လေးရယ်နဲ့ အသားလေးတွေကိုကြော်လိုက်ပါ
Firstly, fry the mince chicken with thick soy sauce and clear soy sauce.
အသားကျက်ပြီဆိုရင် ကြက်သွန်နီ ထဲ့ပါမယ် ( အစတည်းကထဲ့ရင် အရမ်းနွမ်းသွားမှာစိုးလို့ပါ)
Once the mince chicken are cooked, put the sliced onions in (if you fried the onions at the first stage, you would get over-cooked look onion, that’s why)
ပြီးရင် မုန်လာဥနီနှစ်လုံး၊ ဂေါ်ဖီ ပါးပါးလှီးထားတာတို့ကို ရောပါမယ် ပဲငံပြာရည်အနောက် ၊အကြည် တို့ကိုပါရောကြော်ပါမယ်
Then, mix with two carrots(already peeled into noodle like strings), thinly sliced cabbage. Add thick soy sauce as well as clear soy sauce.
ပဲပင်ပေါက်ကိုလဲ မနွမ်းအောင် မုန်လာဥနီနှစ်လုံး၊ ဂေါ်ဖီ ပြီ:မှထဲ့ပါမယ်..
Add sprouts after carrots and cabbage in order to getafresh look.
ကြာဇံထဲ့ပြီးသကြားဆား၊ ကြက်သားမှုန့် အနဲငယ်တို့ကို ပဲငံပြာရည်အကြည် အနောက် နဲနဲစီထဲ့ ၊ ကြာဇံနူးအောင်ရေ နဲနဲတောက်ပြီးကြော် ကြက်သွန်မြိတ်လေးဖြူး ၊ five spice powder လေးနဲနဲဖြူးပြီးရင် အရသာရှိတဲ့ ကြာဇံကြော်ရပါပြီ။
Finally, add the rice noodle, sugar, salt, chicken powder, clear soy sauce then sprinkleabit of water to getasoft texture to the noodle, scatter the sliced spring onions and five spice powder, then there you are,atasty fried chicken rice noodles.
One comment on “ကြက်သား ကြာဇံကြော်/Fried Chicken Rice Noodles”
24/11/2014 @ 4:17 am
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မအိသက် ရေ ။ လူ ၂၀ စာအတွက် ကြာဆံ ဘယ်နှစ်ထုတ် ထည့်ရမလဲ သိချင်ပါတယ် ။